Akwụkwọ ozi si n'aka onye isi Nintendo na ndị na - ekenye ya | Akụkọ akụrụngwa
Tatsumi kimishima, onye isi ala nke ugbu a Nintendo gịnị mere na akụkọ ihe mere eme Satoru Iwata, zigara ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ ozi ebe onye njikwa na-akọwapụta ihe ga-eme n'ọdịnihu nke nnukwu N, ọchịchọ iru ụlọ ọrụ ọhụrụ, na-agwa nnukwu ndị na-ege ntị na ihe mgbaru ọsọ ndị ọzọ e setịpụrụ maka ọdịnihu ụlọ Mario.
Anyị ukwuu nwere ike ikwu na-agụ ya, dị ka ọ bụ a-akpali nnọọ mmasị nkwupụta nke ebumnuche, ebe ajụjụ banyere ugbu a ọnọdụ nke Nintendo, a na-ekwu okwu banyere ihe omimi Nintendo nx, na-abịaru nso smart smartphones ma ọ bụ otu esi eji uru ahịa nke ikike na-adọrọ adọrọ nke ndị Japan.
«Ebe ọ bụ na igba egbe nke Sistemụ Kọmputa Ezinaụlọ (nke a maara dị ka Nintendo Entertainment System na mpụga Japan) na 1983, Nintendo nyere ụwa pụrụ iche na mbụ na ntụrụndụ ngwaahịa n'okpuru echiche nke integrated ngwaike na software mmepe. N'ebe egwuregwu ntụrụndụ ụlọ, ụlọ ọrụ egwuregwu vidio bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ole na ole guzobere na Japan toro n'ụwa niile na Nintendo eguzobewo onwe ya dị ka akara ama ama nke na-anọchite anya ọdịbendị nke egwuregwu vidio gburugburu ụwa.
“Anyị kwenyere na ebumnuche anyị bụ ịmụrụ ọnụ ọchị n’ihu ndị mmadụ gburugburu ụwa site na ngwaahịa na ọrụ anyị yana ọ bụ ya mere anyị ji soro usoro bụ isi anyị iji bulie olu nke ndị mmadụ na-egwu site na ịnye ngwaahịa nke mmadụ niile nwere ike ịnụ ụtọ ya n'adabereghị afọ, okike ma ọ bụ ahụmịhe egwuregwu vidio. Ugbu a, anyị chọrọ ịga n'ihu n'otu ọrụ a site na ịba ụba ọnụọgụgụ ndị mmadụ nwere ikike nke ọgụgụ isi nke Nintendo […] Anyị na-arụsi ọrụ ike na-enye ihe ọgụgụ isi Njirimara nke Nintendo n'ụzọ dị iche iche n'ụzọ nke na ọ bụghị naanị ndị ọrụ nke egwuregwu vidio anyị ugbu a, ọ bụghị ndị ahịa niile (gụnyere ndị na-egwuri egwu ma anaghịzi eme ya na ndị na-enwetụbeghị egwuregwu vidio na mbụ) na-akpọtụrụ anyị Njirimara ọgụgụ isi '.
«N'ihi na anyị njikwa azụmahịa, Nintendo a na-emepe emepe a agba Cha Cha n'elu ikpo okwu codenamed NX nke ga ewetara echiche ohuru. Ihe ngwanrọ anyị na ngwanrọ na ngwanrọ na ngwanrọ ga-anọgide na-abụ isi ahịa nke Nintendo. Ebumnuche nke ịbawanye ọnụ ọgụgụ ndị na-emekọrịta ihe Nintendo nwere ọgụgụ isi, anyị ga-abanyekwa n'ahịa maka ngwaọrụ ndị nwere ọgụgụ isi iji gbalịa ị nweta ego na uru ha yana iji mepụta mmekọrịta anyị na njikwa anyị.
«Dị ka ndị ọzọ, atumatu iji Nintendo ọgụgụ isi Njirimara anyị amalitela ngwaahịa ọhụrụ akpọrọ Amiibo (Ihe odide Nintendo e nyere na ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ kaadị ndị na-arụ ọrụ na egwuregwu vidio anyị). Ọtụtụ ndị ahịa anyị anabatala ha nke ọma. Ọzọkwa, mgbalị anyị agaghị ejedebe na egwuregwu vidio. Anyị na-eme atụmatụ ịnye oghere ọhụrụ na ogige ntụrụndụ site na iji mkpụrụedemede si Nintendo. Anyị ga-emekwa ka ohere ndị na-azụ ahịa na-abanye na kọntaktị na ndị odide Nintendo kwa ụbọchị site na ọdịnaya eserese na azụmaahịa ».
“Yabụ ugbu a anyị na-agbasawanye etu esi eji akụ ọgụgụ isi nke Nintendo n'ụzọ dị iche iche karịa ọdịnala anyị iji iji ha na azụmaahịa njikwa anyị. Ọzọkwa, na mbọ anyị na-eme ka a na-adigide ma na-aga n'ihu mmekọrịta anyị na ndị na-azụ anyị anyị na-eke a usoro ohuru na a sistemụ akaụntụ nnabata ọhụụ nke ahụ kwesịrị ịrụ ọrụ dị ka mmiri n'etiti kọntaktị anyị na ngwaọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ọbụlagodi na gburugburu ebe ndị ahịa anyị nwere ike ịkpọtụrụ ihe ọgụgụ isi nke Nintendo na, ya mere, na-arụ ọrụ dị ka a usoro jirichaa ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ na-emekọ ihe ọgụgụ isi Njirimara nke Nintendo".
«Nintendo ga-aga n'ihu na-agbanwe n'ụzọ na-agbanwe agbanwe, na-emegharị oge ahụ ma na-eji mmụọ nke mmalite sitere na nkwenye na 'ezigbo uru nke ntụrụndụ dị na iche iche', ọ ga-aga n'ihu na-enye ngwaahịa na ọrụ na-eju anya ma na-atọ ndị mmadụ ụtọ ndị mmadụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgụ ozi izizi nke Tatsumi kimishima, ị nwere ike ịchọta otu ihe ahụ na njikọ a. Dika okwu onye isi ala nke NintendoỌ dị ka nnukwu N ga-agbasa azụmaahịa ya ma were usoro aghụghọ dị ike iji bulie akara ya na akụrụngwa ọgụgụ isi ya, n'agbanyeghị na ị chere na, dịka ọ na-eme kemgbe ọgbọ, na-esetịpụ nke ya na azụmaahịa njikwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Akwụkwọ ozi si n’aka onye isi Nintendo nye ndị nwe ya